Izinzuzo eziyisishiyagalombili zeSoy Lecithin Powder - I-Shangke Chemical
8 Izinzuzo zeSoy Lecithin Powder ezingabakhona
Ukuthandwa kwesithasiselo se-soy lecithin kusabalale emhlabeni wonke njengomlilo wehlathi, akumangalisi ukuthengiswa kwenqwaba ye-soy lecithin. ILecithin yigama elivamile elibhekisa kumakhemikhali ahlukahlukene anamafutha atholakala ngokwemvelo ezitshalweni kanye nezicubu zezilwane. Ngaphezu kokuthuthukisa ukuthungwa kokudla, i-lecithin iyaziwa nangamandla ayo okukhulisa impilo yeshalofu yemikhiqizo yokudla ehlukahlukene njengamafutha okupheka nokugqoka kwesaladi.
Ekuqaleni, i-lecithin yayivela e-York York, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, kweminye imithombo ebalulekile kufaka phakathi ikotini, ukudla kwasolwandle, soya, ubhontshisi wezinso, ubhontshisi omnyama, ubisi, i-sunflower nommbila. Kulezi, ama-soya abaphakathi kwemithombo ecebile ye-lecithin, futhi lokhu kusiletha ku-soy lecithin.
Yini iSoy Lecithin?
I-Soy lecithin iyindlela ye-lecithin etholakala kuma-soya abomvu asebenzisa i-solvent yamakhemikhali enjenge-hexane. Ngemuva kwalokho, ukukhipha i-oyile kucutshungulwa ukuze kukhishwe i-lecithin kwamanye ama-Byproducts futhi emva kwalokho, ukomiswa kwe-lecithin kwenzeka. Kuphakathi kwezengezo zokudla ezivame kakhulu njengamanje ezimakethe.
I-Soy lecithin powder isetshenziswa ezindaweni ezivamile kanye nezitolo zezempilo njengesiqukathi somkhiqizo wokudla ukuthuthukisa impilo yabathengi. Izithako ezenziwa nge-soy lecithin powder zinikezela ngezinsizakalo eziningi zezinzuzo zezempilo kufaka phakathi ukuncishiswa kwe-cholesterol. Lokhu kungenxa yokuqukethwe kwabo okuphezulu kwe-phosphatidylcholine ne-phosphatidylserine. Lezi phospholipids ezimbili ziba usizo ekuphathweni kwe-lipid yomzimba womuntu, phakathi kweminye imisebenzi.
Izinzuzo eziyisishiyagalombili zeSoy Lecithin
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-soy lecithin inezinzuzo eziningi, yona emikhulu:
Inani elikhulu le-cholesterol emzimbeni womuntu liheha izingozi eziningana zempilo, okuyilo elibi kakhulu ukuba sengozini yokuhlaselwa yinhliziyo. Ngenhlanhla, abacwaningi ababhekene nokudla kwe-soy lecithin bathole ukuthi ama-soy lecithin powder noma ama-soy lecithin amaphilisi angasiza isibindi ekukhiqizeni inani eliphakeme le-high-density lipoprotein (HDL), elibizwa nangokuthi "good" cholesterol.
Lapho amazinga e-HDL enyuka, amazinga e-cholesterol amabi (low-density lipoprotein) anciphisa. Zikhona ezinye izindlela umuntu anciphisa izinga le-cholesterol emzimbeni wabo, kepha ukuthatha amaphilisi we-soy lecithin, ubisi lwe-soy lecithin noma ukudla okubandakanya i-soy lecithin powder kungenye yezindlela zemvelo ezisebenza kahle.
Kwenziwe ucwaningo lokuhlola umthelela wokudla kwe-soy lecithin kubantu abane-hypercholesterolemia (amazinga aphezulu e-cholesterol esegazini). Abaphenyi baphawula ukuthi ama-soy lecithin nsuku zonke anezela ukudla (cishe ama-milligram ayi-17 ngosuku) okwehla kwama-cholesterol angama-41 aphelele ku-hypercholesterolemia emva kwenyanga eyodwa.
Ngasikhathi sinye, izinga le-cholesterol ye-LDL lehle ngamaphesenti angama-42 namaphesenti angama-56 ngemuva kwezinyanga ezimbili. Lokhu kuphakamisa ukuthi ukudla okujwayelekile kwe-soy lecithin supplement kungaba yikhambi eliphumelelayo le-hypercholesterolemia.
I-2.Soy lecithin kanye nokuvimbela umdlavuza webele
Ngokusho kocwaningo lwe-Epidemiology Journal lwango-2011 olugxile entshweni ye-soy lecithin kanye nokulimazeka komdlavuza webele, ukusetshenziswa kwe-lecithin kungahlanganisa ukwehlisa ingozi yomdlavuza webele. Abaphenyi baphawule ukwehla kwesifo somdlavuza webele kwabesifazane base-postmenopausal abaphuza izithasiselo ze-soy lecithin ngaphakathi kwecala.
Kusolwa ukuthi kungenzeka ukuthi lokhu kunciphisa umdlavuza kungenzeka ngoba i-soy lecithin iqukethe i-phosphatidylcholine. Lapho kugayishwa, i-phosphatidylcholine ishintsha ibe yi-choline ebamba iqhaza elibalulekile ekunciphiseni ubungozi bomdlavuza.
Kodwa-ke, i-soy lecithin eyengeziwe kanye nocwaningo lomdlavuza webele kuyadingeka ukuthola ukuthi ngempela, i-soy lecithin ingaba ukwelashwa kwemvelo okusebenzayo komdlavuza webele.
3.Ulcerative colitis impumuzo
I-ulcerative colitis, isifo samathumbu esivuvukayo esibonakaliswa wukugaya okungapheli kokudla kwezitho zokugaya ukuvuvukala, sibangela izinhlungu eziningi kulabo abahlukunyezwayo. Ngenhlanhla, labo abamukele umsoco we-soy lecithin bathola impumuzo enkulu yezimpawu zesifo.
Lapho i-soy lecithin isengezela ifinyelela ikholoni, iyagxila, idala umgoqo emilenzeni wesisu futhi ithuthukise i-mucous yayo. Isithiyo sivikela ikoloni ekuthelelekeni kwamagciwane futhi sinomthelela kwinqubo yokugaya engcono.
Okungcono futhi, ucwaningo lukhombisa ukuthi okuqukethwe kwe-phosphatidylcholine ku-soy lecithin powder kunganciphisa ukuvuvukala okuhambisana ne-ulcerative colitis. Lokhu kungaphezulu kokubuyisa isithiyo se-mucus esonakaliswe yilesi sifo.
4.Better ukucindezelwa ngokomzimba nangokwengqondo
I-Soy lecithin iqukethe i-phosphatidylserine, i-phospholipid ebalulekile eyaziwa ukuthonya ama-hormone okucindezela. Ikakhulu, abacwaningi bacabanga ukuthi i-phosphatidylserine tata isebenza nge-phosphatidic acid (ekhona ku-soy lecithin futhi) ukunikela ngomthelela wokunciphisa ukucindezela komzimba womuntu. Ngenxa yalokhu, olunye ucwaningo luveza ukuthi i-soy lecithin ingaba ukwelashwa kwemvelo kwezimo zempilo ezihlobene nokucindezela.
Ngaphezu kwalokho, okutholakele ocwaningweni olwenziwe ngo-2011 futhi kwafakwa kwi-American Journal of Clinical Nutrition kuphakamisa ukuthi abantu abanokuphezulu Ukudla i-choline (kufaka phakathi abathengi be-soy lecithin ejwayelekile) babe nezinga lokucindezela ngokomzimba nangokwengqondo okuphansi. Ngakho-ke, ukusebenza kahle kwememori futhi kunciphise imithelela yokuwohloka komqondo.
Lapho kuthathwa njengokunconywayo, amaphilisi we-soy lecithin angathuthukisa ukubukeka kwesikhumba sakho. Kuyikhambi lemvelo eliphumelelayo le-eczema kanye nomqubuko, ngenxa yempahla yayo ye-hydration. Shono i-soy lecithin isithako esiyinhloko emikhiqizweni ye-skincare.
Izifundo ezenziwa ezilwaneni ukuhlola umthelela we-soy lecithin zikhombisile ukuthi zingakhuthaza ukusebenza komzimba. I-soy yansuku zonke ama-lecithin ama-supplements asize amangqamuzana egazi amhlophe ekulweni kwawo namagciwane asemthanjeni wegazi.
7.Dementia izimpawu impumuzo
Ngenxa yokuqukethwe kwe-choline ephezulu, i-soy lecithin inegalelo ekuxhumaneni okungcono phakathi kwengqondo yomuntu nezinye izitho zomzimba. Lokhu kungenxa yokuthi i-choline yi-ejenti ebalulekile kwezokuxhumana. Kanjalo, abantu abanenkinga yokuwohloka komqondo bangazuza kakhulu kwi-soy lecithin uma beyifaka ezinhlelweni zabo zokudla zansuku zonke.
Ukukhululeka kwesibonakaliso se-8.Menopause
Ucwaningo oluningi lubonisa ukuthi i-soy lecithin yokufakelwa kokudakayo inganikeza ukukhululeka kwesibonakaliso sokuya esikhathini. Ikakhulu, kutholakele ukuqinisa ubungqabavu, ukuqinisa ukuqina kwe-arterial futhi kulethe amazinga wegazi ophansi kube okujwayelekile phakathi kwabesifazane abahamba ngabesilisa.
Ocwaningweni olwenziwe ngonyaka ka-2018, abesifazane abangama-96 abaseminyakeni ephakathi kuka-40 kuye kwengama-60 basebenziswa njengocwaningo isampula ukuthola ukuthi ama-soy lecithin supplements ayekwazi yini ukwenza ngcono izimpawu zokukhathala kubantu besifazane aba-menopausal. Abanye bafakwa ku-soy lecithin supplement puso nokunye okuse-placebo.
Ngemuva kwenkathi yokuqulwa kwecala, abacwaningi bathola ukuthi abesifazane ababesezingeni lokuncelisa le-soy lecithin babenekuqina okungcono kokuqina kanye nomfutho wegazi we-diastolic njengoba kuqhathaniswa neqembu le-placebo. Futhi, impumuzo yesibonakaliso sokukhathala yangaphambili, kodwa lokho bekungenjalo ngeqembu le-placebo.
Ngabe isebenza kanjani i-lecithin?
Njengamanye ama-phospholipids, ama-lecithin amangqamuzana ancibilika emanzini kodwa kawoyela. Kodwa-ke, uma amanzi ehlanganiswa ne-oyile, i-molecule iyoncibilika kuleyo ngxube. Eqinisweni, zivame ukutholakala ezingxenyeni eziqukethe amanzi no-oyela, ikakhulukazi lapho ama-mocule amanzi emngceleni we-molecule kawoyela. Ezindaweni ezinjalo, ama-acid awo aqeda ukungena lapho athintana namafutha namaqembu we-phosphate emanzini.
Ngenxa yalokho, i-lecithin i-emulsify iyakwazi ukwakha izivikelo ezincane zokuzungeza amaconsi kawoyela, ngaleyo ndlela igcizelela uwoyela emanzini. Amaqembu we-phosphate adonswa ngamanzi avumela amaconsi kawoyela athi, esimweni esijwayelekile, angalokothi abekhona emanzini, ukuhlala emanzini isikhathi eside. Lokhu kuchaza ukuthi kungani imayonnaise nesaladi ukugqoka kungahlukanisi izingxenye ezihlukile ze-oyili namanzi.
Imiphumela emibi ne-soy lecithin kanye nobungozi
Ukusetshenziswa kwe-soy lecithin kungadala imiphumela emibi ye-soy lecithin. Imiphumela evamile emibi ye-soy lecithin ifaka phakathi:
Ngabe kubangela ukungezwani kwama-soya?
Uma umzimba wakho usebenza kakhulu kuma-soya, ungahlakulela ukungezwani komzimba lapho udonsa i-soy lecithin. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi uthintane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uma kwenzeka uhlangabezana nosizi lwe-soya ngaphambi kokuqala ukuthatha ubisi lwe-soy lecithin, izengezo ze-soy lecithin yanoma yimuphi omunye umkhiqizo wokudla oqukethe i-soy lecithin.
Ngakho-ke, i-soy allergy ibuye ibe phakathi kwemiphumela emibi yesoy lecithin. Kodwa-ke, kwenzeka kuphela ezimweni ezingavamile.
Ngabe kukhona ukuxhumana phakathi kwe-soy lecithin kanye namazinga e-estrogen emzimbeni wakho?
Kube nokukhathazeka okuphikisanayo ngobuhlobo phakathi kwe-soy lecithin kanye namazinga e-estrogen emzimbeni womuntu. Abanye abantu bathi ukusetshenziswa kwe-soy lecithin kungaphazamisa ukukhiqizwa okujwayelekile kwe-thyroid nama-endocrine mahormone. Ngokuxakayo, ukuphazamiseka kungaholela ezinkingeni ezahlukahlukene zezempilo kubandakanya nezinkinga zokuya esikhathini.
Kodwa-ke, isimo sangempela siwukuthi abukho ubufakazi besayensi obukhombisa ukuthi umzimba womuntu ungasebenzisa i- “estrogen estrogen” njengayo. ILecithin estrogen ingathinta kuphela umsebenzi we-estrogenic womuntu uma uqhamuka emthonjeni wesilwane. Ucwaningo olwenziwe nguTorne Research lweseka lesi sikhundla. Ukutholwa kocwaningo kukhombisa ukuthi i-soya ne-soy by-product ayizibangeli izingqinamba ze-estrogenic kubantu.
Ngakho-ke, akukho buhlobo phakathi kwamazinga we-soy lecithin kanye ne-estrogen emzimbeni womuntu.
Ungayithatha Kanjani iSoy Lecithin Supplement?
Izithasiselo zeSoy lecithin zitholakala ngezindlela ezahlukene kufaka phakathi amaphilisi we-soy lecithin, amaphilisi we-soy lecithin, i-soy lecithin paste, i-soy lecithin ewuketshezi kanye no-grayles we-soy lecithin.
Okuyikho umthamo we-soy lecithin kuhlobene nomuntu nomuntu. Lokhu ngoba kuncike ezintweni ezahlukahlukene njengesimo sempilo esivamile kanye nobudala bomthengi.
Kuyaqapheleka ukuthi abukho ubufakazi obanele besayensi obukhombisa umthamo oqondile we-lecithin ophephile kwisimo esithile. Kodwa-ke, ezimweni eziningi, umthamo usukela ku-500mg uye ku-2,000 XNUMXmg, kodwa kubalulekile ukuthi ubonane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze akuqinisekise ngethamo elihle kakhulu kuwe.
Yize lokhu kungeyona imfuneko, kungakuhle ukuthi uthathe izithasiselo ze-soy lecithin ngokudla.
I-Soy lecithin powder isebenzisa
i-soy lecithin powder isetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene kufaka phakathi:
Ukuqinisa amandla: Abakhiqizi bomkhiqizo wokudla nowokwenza izimonyo benza i-soy lecithin ithenge ukusebenzisa i-soy lecithin powder njenge-emulsifier noma i-ejenti yokuhlanganisa izinqubo zabo zokukhiqiza.
Ukulondolozwa kokugcotshwa nokudla: lapho ihlanganiswe nemikhiqizo yokudla efana noshokoledi, amatshe okugcoba, ibhotela le-nati, ukudla okubhakiwe kanye nokugqoka isaladi noma imikhiqizo yezimonyo (izimonyo, ama-shampoos, ama-conditioners wesikhumba, ukuhlanza umzimba noma ama-balms we-lip) i-soy lecithin powder isebenza njengesibambiso esimnene, esandisa impilo yayo yeshalofu .
Abanye abantu benza i-soy lecithin bayithenga ukuze basebenzise i-lecithin njengesibambiso semikhiqizo yabo eyenziwe ekhaya yezimonyo neyokudla.
Ukungezelelwa kweCholineAbantu abaningi benza i-soy lecithin ithenge ngoba bayazi ukuthi i-soy lecithin powder ingumthombo ocebile we-choline. Ungafafaza isipuni esisodwa noma ezimbili zikafulawa ku-smoothie yakho, ujusi, yoghurt, okusanhlamvu, oku-oatmeal noma okunye ukudla noma isiphuzo osithandayo nsuku zonke.
Lesi sengezo sikunikeza uhlu lwezinzuzo zezempilo. Izinzuzo zibandakanya ingozi yomdlavuza webele ophansi, ukugayeka okuthuthukile, ukuqunjelwa kobuhlungu, impilo engcono kwengqondo, ukukhululeka kwezimpawu zokuwohloka komqondo kanye nokwenza mzimba okuthuthukile, phakathi kwabanye.
Lecithin Nokulahlekelwa Isisindo
I-Lecithin isebenza njengomshini wemvelo oshisa amafutha kanye ne-emulsifier emzimbeni womuntu. Okuqukethwe kwe-choline ku-lecithin kuncibilika amafutha anqwabelene emzimbeni, kuqinisa ukusebenza kahle kwamafutha we-metabolism. Kanjalo, umzimba uyakwazi ukushisa amanoni aphezulu nama-kilojoule, yingakho ukuncipha kwesisindo.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abathatha i-lecithin bathola ukusebenza kangcono komzimba nokukhuthazela njengoba kuqhathaniswa nalabo abangakwenzi. Ngakho-ke, ngokungezelelwa kwe-lecithin, umuntu uyakwazi ukusebenza ngokuzikhandla nangesikhathi esengeziwe, okuholela ekunciphiseni isisindo.
Kuzo yiwaphi Thenga uSoy Lecithin
Uzibuza nge-soy lecithin ukuthi ungayithenga kuphi? Uma usesha ku-inthanethi, uzothola ukuthi kunemithombo eminingi lapho ungathenga khona inqwaba ye-soy lecithin uma ufuna ukuthengiswa kwe-soy lecithin. Kodwa-ke, kufanele wenze ngenkuthalo efanele ukusungula ubuqotho bomthengisi ukuze uqiniseke ukuthi inqwaba ye-soy lecithin oyithengayo iyiqiniso ngempela. Ungathembi noma ngubani othi une-soy lecithin ayithengiswa uma ungafuni ukuwela ezandleni zabathengi noma abathengisi mbumbulu. Iya kumthengisi oqinisekisiwe futhi onamalayisense.
Ukusetshenziswa kwe-soy lecithin kuningi futhi izinzuzo zayo zedlula ubungozi obukhona kanye nemiphumela emibi ehambisana nokusetshenziswa kwe-soy lecithin. Kodwa-ke, abasebenzisi be-soy lecithin kufanele balandele isincomo sokunconywa komthamo wesengezo ukuze uthole okungcono kukho. Ngaphandle kwalokho, noma nini lapho bafuna ukwenza i-soy lecithin ithengele ukusetshenziswa kwabo noma ibhizinisi, umuntu kufanele aqiniseke ukuthi bayithola emthonjeni othembekile.
UChung, C., Sher, A., Rousset, P., Decker, EA, & McClements, DJ (2017). Ukwenziwa kwama-emulsions wokudla kusetshenziswa ama-emulsifiers wemvelo: Ukusetshenziswa kwe-quillaja saponin ne-soy lecithin ukwakhela abamhlophe ikofi abelungu. Ijenali Yobunjiniyela Bokudla, 209, I-1-11.
UHirose, A., Terauchi, M., Osaka, Y., Akiyoshi, M., Kato, K., & Miyasaka, N. (2018). Umphumela we-soy lecithin kwizimpawu zokukhathala nezimpawu zokuya esikhathini kubantu besifazane abaneminyaka ephakathi nendawo: isifundo esingakheliwe, esinezimpumputhe kabili, esilawulwa yi-placebo. Ijenali Yezempilo, 17(1), i-4.
Oke, M., Jacob, JK, & Paliyath, G. (2010). Umphumela we-soy lecithin ekwandiseni ijusi yezithelo / ikhwalithi yesoso. Ucwaningo lokudla lwamazwe aphesheya, 43(1), i-232-240.
I-Yokota, D., Moraes, M., & Pinho, SCD (2012). Isici se-lipophosomes ye-lyophilized ekhiqizwa nge-soy lecithin engahlanjululwanga: isifundo secala se-casein hydrolyzate microencapsulation. Ijenali yaseBrazil yobunjiniyela bamakhemikhali, 29(2), i-325-335.
UZüge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, no-de Paula Scheer, A. (2013). Inversion eyinhlekelele nokuziphatha kwe-rheological ku-soy lecithin naphakathi kwama-emulsions wokudla asuselwa ku-80. Ijenali yobunjiniyela bokudla, 116(1), i-72-77.